Feb. 18, 2021 Updated: Feb. 18, 2021 10:52 a.m.
1of8Journalists Katsiaryna Andreyeva, right, and Daria Chultsova stand inside a defendants' cage in a court room in Minsk, Belarus, Thursday, Feb. 18, 2021. A court in Belarus on Thursday sent two female journalists to prison for years on charges of violating public order after they covered a protest against the nation's authoritarian president. The court in the Belarusian capital of Minsk on Thursday handed two-year sentences to Katsiaryna Andreyeva and Daria Chultsova of the Belsat TV channel.APShow MoreShow Less
2of8Journalist Katsiaryna Andreyeva gestures inside a defendants' cage in a court room in Minsk, Belarus, Thursday, Feb. 18, 2021. A court in Belarus on Thursday sent two female journalists to prison for years on charges of violating public order after they covered a protest against the nation's authoritarian president. The court in the Belarusian capital of Minsk on Thursday handed two-year sentences to Katsiaryna Andreyeva and Daria Chultsova of the Belsat TV channel.APShow MoreShow Less
4of8Journalist Daria Chultsova gestures inside a defendants' cage in a court room in Minsk, Belarus, Thursday, Feb. 18, 2021. A court in Belarus on Thursday sent two female journalists to prison for years on charges of violating public order after they covered a protest against the nation's authoritarian president. The court in the Belarusian capital of Minsk on Thursday handed two-year sentences to Katsiaryna Andreyeva and Daria Chultsova of the Belsat TV channel.APShow MoreShow Less
5of8Journalists Katsiaryna Andreyeva, right, and Daria Chultsova embrace inside a defendants' cage in a court room in Minsk, Belarus, Thursday, Feb. 18, 2021. A court in Belarus on Thursday sent two female journalists to prison for years on charges of violating public order after they covered a protest against the nation's authoritarian president. The court in the Belarusian capital of Minsk on Thursday handed two-year sentences to Katsiaryna Andreyeva and Daria Chultsova of the Belsat TV channel.APShow MoreShow Less
7of8Police carry documents and computers out of the office of the Belarusian Association of Journalists as Andrei Bastunets, the head the Association, right, stands inside the office in Minsk, Belarus, Tuesday, Feb. 16, 2021. Authorities in Belarus have raided the homes and offices of journalists and human rights activists. It is the latest move aimed at squelching a wave of demonstrations against authoritarian President Alexander Lukashenko. Police searched the offices of the Belarusian Association of Journalists and the Viasna human rights center, as well as the apartments of its members.APShow MoreShow Less